Ungazi njani ukuba luthando okanye ubuhlobo ▷ ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Indlela yokwazi ukuba luthando okanye ubuhlobo. Kuyinto eqhelekileyo ukuziva sididekile xa sikuloo nto idumileyo.mfake kwindawo yabohlobo«. Uyazibuza: Wazi njani ukuba bubuhlobo okanye enye into? Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ngokwenene ukwindawo yobuhlobo okanye ukuba umntu omkhathaleleyo naye uva amabhabhathane esiswini xa ekujonga? Ukuqinisekisa, funda eli nqaku ngeengcebiso kwaye ufumane iimpawu ezifihlakeleyo zomdla wamadoda.
1 Indlela yokwazi ukuba luthando okanye ubuhlobo ngokusebenzisa ezinye iimpawu
1.1 1. Ikuxelela yonke into
1.2 2. Thetha ngomnye umntu
1.3 3. Ukunika iziteketiso
1.4 4. Uligxalaba lokukhalela kulo
1.5 5. Zive unovalo ecaleni kwakho
1.6 6. Zama ukwenza njengoCupid
1.7 7. Ukuqhagamshelana nomzimba
Indlela yokwazi ukuba luthando okanye ubuhlobo ngokusebenzisa ezinye iimpawu
Yazi ukuba luthando okanye ubuhlobo ngokusebenzisa iimpawu
Kakade ke, imeko nganye yahlukile. Abantu basabela ngeendlela ezahlukeneyo kwaye nabo baziphatha ngendlela eyahlukileyo. Nangona kunjalo, nangona oku, kunokwenzeka chonga ezinye iimpawu ukuqonda ukuba kukho enye into okanye bubuhlobo obuhle.
Kubalulekile ukuyenza icace into yokuba akukho kusetyenziswa ukuba yi-paranoid kunye nokucinga ukuba nayiphi na inkcukacha luphawu: Ikhemistri kunye nokuvisisana phakathi kwakho kubaluleke kakhulu kunayo nayiphi na incwadi okanye isikhokelo. Kodwa kunjalo, kusoloko kulungile ukukhankanya iingongoma ezithile ezidla ngokugqama kubo bonke abantu xa benomdla kumntu othile.
1. Ikuxelela yonke into
Hlala ucinga: ngaba ungumntu umhlobo wakho ajonge kuye ukuba athethe naye xa eneengxaki? Mhlawumbi ngokwenene ukwindawo yobuhlobo. Xa inkanuko ibuyiselwa, kukho a umoya wemfihlakalo kunye neemvakalelo. Ngoko ukuba rhoqo yabelana ngokupheleleyo ngayo yonke into eyenzekayo ebomini bakho Ekunye nawe, akenzi nowona mzamo umncinci wokukuchukumisa okanye enze loo moya wokulindela. Okunokwenzeka ndikubona njengomhlobo kuphela.
2. Thetha ngomnye umntu
Xa uzibuza: Wazi njani ukuba bubuhlobo okanye enye into? Mhlawumbi olu lolona phawu lucacileyo lokuba umntu ukugqala njengomhlobo. Ukuba uqala ukuthetha ngokuthandana nomnye umntu, ngokuqinisekileyo ukwindawo yobuhlobo. Kuyafana ke naxa ekucela icebiso lothando engacinganga nokuba unomdla kuye.
3. Ukunika iziteketiso
Ukuba uluhlobo olo ukufowunela ngeziqhulo ezimnandi ezinje ngo "sister okanye bhuti"Usenokungaziva uthando olukhulu kwicala lakho ngekamva elibonakalayo. Loo nto ayithethi ukuba inkwenkwe okanye intombazana ayinakuze ikubone ngamehlo ashushu, koko kukuba ngoku ungumhlobo nje.
4. Uligxalaba lokukhalela kulo
Olunye uphawu olulumkisayo olubonisa ukuba uyinxalenye yendawo yobuhlobo kuxa umntu ephethukela kuwe xa olunye ulwalamano luphela. Cinga ngezi meko, kuba kunokwenzeka oko ube nje igxalaba friendly ukukhala kwiimeko ekunzima ukuzisingatha.
5. Zive unovalo ecaleni kwakho
Olu lolunye uphawu oluqhelekileyo lwendawo yobuhlobo. Xa imvakalelo yothando, iqhelekile ukuba umntu azive enovalo. Ukuba ubonakala engaphumli, eqalisa ukuhleka izinto ezingahlekisiyo, okanye azame ukukuchukumisa ngandlel’ ithile, oko kuluphawu lokuba mhlawumbi olu thando ludlulela ngaphaya kobuqabane. Kulwalamano lobuhlobo, umntu akenzi mgudu wokuzama ukukholisa okanye ukukholisa omnye umntu.
Olunye uphawu lwakudala lobuhlobo xa ethetha izinto ngaphandle kokuxhalaba okuncinci malunga nendlela oya kusabela ngayo kwinto ayithethayo, oko kukuthi, akukho nkxalabo malunga nendlela oza kusabela ngayo.
6. Zama ukwenza njengoCupid
Wazi njani ukuba bubuhlobo okanye enye into? Olu phawu lulula! Ngaba uthetha ngomntu oziqhelanisa nawe? Ngaba ukhe wazama ukuthandana nomnye umntu? Olunye uphawu lwesilumkiso. Ke ngoko, hlala unikela ingqalelo kwezo nkcukacha okanye, ngakumbi, ukuba xa uphuma, uthatha umhlobo kuba ucinga ukuba unokwenza isibini esigqibeleleyo.
7. Ukuqhagamshelana nomzimba
Xa imvakalelo inye, iqhelekile funa i-caress kunye noqhagamshelwano lomzimbaNokuba kumdlalo okanye njengesizathu sokusondelelana. Ukuba oku akuze kwenzeke kuwe, naxa kukho ithuba, kungenxa yokuba akananjongo yokugcina unxibelelwano olukhethekileyo lomzimba.
Ulwimi lomzimba luthetha kakhulu ngomnye umntu, kodwa kufuneka unikele ingqalelo kuyo. Ngalo lonke ixesha ulumke kakhulu ukuba ungacingi ukuba yonke into eyenziwa yintombazana ngomzimba wayo luphawu lomdla kuba unokuba yi-paranoid kwaye ubone imikhondo apho kungekho nto ikhona.